Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo si wada jir ah u soo saaray War-murtiyeed |
Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaaraha Ethiopia oo si wada jir ah u soo saaray War-murtiyeed
Madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si wadajir ah u soo saaray War Murtiyeed la xiriira booqasho rasmi ah oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmajo maanta ku tagay magaalada Addis Ababa.
In labada dal in si xor ah dhaqdhaqaaq ganacsi uu dhex maro.
Dowlada Ethiopia oo soo dhoweysay qorshaha dowlada Soomaaliya ee lagu xoojinayo amniga iyo sii xoojinta dagaalada ururka Al-Shabaab.
labada dal oo isku aragti ka noqday sidii loo xoojin lahaa dhismaha ciidamada Soomaaliya loona diyaariyo in ammaanka dalka kala wareegaan AMISOM.
Iskaashi laga yeesho sidii abaaraha loogaga hortagi lahaa.
In shirka London uu noqdo mid ay Soomalidu leedahay iyo qodobo kale.
Waxaa lagu wadaa in wada hadalo dheeraad ah inay labada dhinac ku yeeshaan Xarunta Madaxtooyada.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqashada uu ku tegey dalka Itoobiya waxa ay tahay markii labaad oo ay wada kulmaan Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Desalegn oo ka mid ahaa madaxdii ka soo qeybgashay xafladii lagu caleema saarayay Madaxweyne Farmaajo.